के त्यहाँ कपाल हटाउने उपकरण छ कि स्थायी कपाल हटाउन को लागी प्राप्त गर्न सक्छ? - उद्योग समाचार - शेन्ज़ेन नोबल स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड
के त्यहाँ कपाल हटाउने उपकरण छ कि स्थायी कपाल हटाउन प्राप्त गर्न सक्छन्?
समय: 2020-06-12 हिट्स: 5
मैले देखेको छु कि धेरै कपाल हटाउने यन्त्रहरूले स्थायी कपाल हटाउने अवधारणालाई हाइलाइट मार्फत आफ्ना उत्पादनहरू प्रमोट गर्दैछन, जसले धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई त्यस्तो प्रेम गर्छन र उनीहरू अब कपाल हटाउने पछि कपालको समस्याको बारेमा चिन्ता गर्दैनन् भन्ने सोचमा छन्। मैले यो स्पष्ट पार्न सक्छु कि यस समयमा कपाल हटाउने उपकरणको कुनै ब्रान्ड छैन वा कपाल हटाउने कुनै पनि प्रकारले पूर्ण स्थायी कपाल हटाउन सक्छ।
त्यसोभए किन लेजर कपाल हटाउने उपकरणहरू वा गृह फोटोन कपाल हटाउने उपकरणहरूले दावी गरे कि तिनीहरू स्थायी कपाल हटाउन सक्छन्? यो उनीहरूले प्रयोग गर्ने कपाल हटाउने सिद्धान्तबाट सुरू हुन्छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, यसले कपालको फोलिकल्समा मेलानिन प्रयोग गर्दछ र प्रकाश उर्जामा उर्जा लिन र यसलाई तातो ऊर्जामा रूपान्तरण गर्दछ ताकि कपालको फोलिकुलहरू नष्ट हुन्छन् ताकि तिनीहरू अब बढ्न सक्दैनन्। यस सन्दर्भमा, वास्तवमै कपाल "मौलिक" हटाउन सम्भव छ
तर मानव शरीरको स्वयं उपचार र चयापचय कार्यहरू छन्, र बिग्रिएको ठाउँहरू सँधै बिस्तारै मर्मत हुनेछ। कपालको फोलिकल्समा पनि यही सत्य हुन्छ। यद्यपि तिनीहरू अस्थायी रूपमा क्षतिग्रस्त छन्, तिनीहरू जहिले पनि बिस्तारै मर्मत गरिन्छन्, र त्यसपछि कपाल फिर्ता बढ्छ। कपाल फोलिकल पुन: जीर्णताको लागि समय प्रत्येकको शारीरिक अवस्थासँग सम्बन्धित छ, केही मानिसहरूलाई २- 2-3 वर्ष चाहिन्छ, कोही मानिसहरूलाई १० बर्ष लाग्न सक्छ।
अघिल्लो: कुन घरको कपाल हटाउने उपकरण राम्रो र सस्तो छ?
अर्को: मैले कपाल हटाउने उपकरण किन्नुपर्दछ वा ब्यूटी सलुनमा जानुपर्दछ जब म कपाल बन्द गर्न चाहन्छु？